जानौं ! कुन सागले कस्ता -कस्ता रोगबाट बचाउँछ – News Nepali Dainik
जानौं ! कुन सागले कस्ता -कस्ता रोगबाट बचाउँछ
प्रकाशित मिति: बिहिबार, चैत्र १९, २०७७ समय: १६:३९:४९
काठमाडौं – चिसो मौसम सुरु भएसँगै हरियो सागसब्जिहरु खेतबारीमा लगाउँने गरिन्छ । हरियो साग तरकारीहरु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले बहुउपयोगी मानिन्छ । जसलाई हामी धेरैमात्रामा खाने गर्दछौं । यो हामी सबैको भान्सामा तरकारीको रुपमा प्रयोग हुदै आइरहेको छ ।
सबैलाई हरीयो साग खानुपर्छ भनेर जानकारी भएपनि यसको फाइदाबारे कतिपय व्यक्तिहरु जानकार नहुन सक्छन् । विभिन्न किसिमका सागपातहरुले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन, फलाम, पोटासियमजस्ता तत्वहरू प्रदान गर्छ । जसले शरीरलाई स्वास्थ र फुर्तिलो बनाउँन मद्दत गर्छ । कुन सागले हाम्रो स्वास्थ्यमा कस्तो फाइदा पुर्याउँछ जानौंः
सिस्नु गरिबले खाने तरकारीका रुपमा प्रचलीत थियो । तर हाल यसको बहुउपयोगीताको बारेमा जानकारी पाएपछि सबैले खान थालेका छन् । सिस्नु रक्तअल्पता, मधुमेह, उच्चरक्तचाप र दमरोगका बिरामीहरुको लागी महत्वपुर्ण र फाइदाजनक तरकारी हो । यसको सेवनले सुत्केरी आमाको दूधको मात्रा बढाउँछ, घाउ निको गर्छ, कपाल बढाउँछ, रगतमा भएको विष सफा गर्छ, मृगौलाको पत्थरी हुनबाट बचाउँछ ।
रायोको साग हामी सबैको भान्छामा पाइने तरकारी हो । रायोको सागमा हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक खनिज पदार्थ जस्तै फलाम, पोटासियम, क्याल्सियम जिन्क, भिटामिन ए, के, सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । रायोको साग नियमित खानाले हड्डी खिइने, रक्त अल्पता, मुटुरोग, प्रोस्टेट क्यान्सर इत्यादि रोगहरूबाट बचाउँछ ।
तोरीको सागले खानाले पाचन प्रणाली, मुटु, मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्दछ । यसमा खनिज, फाइबर, भिटामिन के, ए, सी, ई र फोलेट पाइन्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट र एन्टीइन्पलामेन्टरी पाइने हुनाले यसले पिसाब थैली, ठुलो आन्द्रा, फोक्सो र डिम्बाशयको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ ।
चम्सुरको सागमा भिटामिन ए, सी र के प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । आँखाको ज्योती बढाउँछ । रतन्धो, मोती बिन्दुबाट बचाउँछ । चम्सुरको सागले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ ।
मेथीको सागलाई प्राचीनकालदेखि हर्बल जडिबुटिको रुपमा प्रयोग गरिंदै आएको छ । यसको पात तितो भएपनि विभिन्न रोगहरू निको पार्न सहयोग गर्दछ ।यसमा विभिन्न पौष्टिक पदार्थहरू पाइन्छ जसले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ । एक चिया चम्चा मेथीको गेडामा ३५ ग्राम क्यालोरी साथै अन्य पोषक पदार्थहरू पाइन्छ । यसले पेटसम्बन्धी समस्याको समाधानमा मद्दत गर्दछ । यसले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कब्जियत, बाथ रोगमा निको पार्न सहयोग गर्दछ । मेथी सौन्दर्यका लागी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मेथीले कपाल लामो र चम्किलो पार्दछ ।
पालुङ्गोको सागमा प्रशस्त मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्ट ,पोटासियम, भिटामिन ए, के र फाइबर पाइन्छ । यसले मधुमेह, क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, रक्तअल्पताको लागि लाभदायक हुन्छ । पालुङ्गोको सागले आँखा, छाला र कपाललाई स्वस्थ राख्छ ।
कर्कलोमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, भिटामिन ए, सी, इ र फोलेट पाइन्छ । कर्कलो एन्टिअक्सीडेन्टको स्रोत हो । कर्कलोले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ, कोलोस्टेरोल नियन्त्रण गर्छ, आँखा, छाला, गर्भाअवस्थामा भुण्रलाई स्वस्थ राख्छ, रक्तअल्पता कम गर्न सहयोग गर्दछ ।
बेथेको सागमा विभिन्न किसिमका पोषक पदार्थहरू जस्तै रेशा, भिटामिन ए, सी र खनिजहरू जस्तै क्याल्सियम, फलाम, पोटासियम, फोस्फोस्रस, म्याग्नेसियम र जिङ्क पाइन्छ । बेथेको सागको प्रयोग गर्नाले कब्जियत, पाइल्स, स्कर्बी, रक्तअल्पता, जुका, मृगौलाको पत्थर, मुखको अल्सर, स्वास गन्हाउने समस्या हटाउन मद्दत गर्दछ । मस्तिष्क र शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । रगत सफा गर्छ । यस्तो बहुगुणी बेथेको सागलाई नियमित रुपमा प्रयोग गर्न सके विभिन्न खतरनाक रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ ।
यो साग काँचै खाने भएकाले यसलाई सलाद साग भनिन्छ । यसलाई भिटामिन के, ए, सी र पोटासियमको राम्रो स्रोत मानिन्छ । सलाद सागले मधुमेह, क्यान्सर, हृदयरोग, अनिद्रा, ग्यास्टिक हुनबाट बचाउँछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, मेटाबोलिज्म राम्रो बनाउँछ ।
हरियो सागपातमा विभिन्न किसिमका भिटामिन र खनिज पदार्थ पाइन्छ । जुन हाम्रो शरीरको लागि अत्यावश्यक हुन्छ । तर तरिका मिलाए यस्ता साग–तरकारी पकाउँदा पौष्टिक पदार्थहरू खेर गइरहेको हुन्छ । जस्तै सागलाई मसिनो टुक्रा बनाउएर मिचीमिचि हरियो झोल जाने गरी पखाल्ने गर्छन त्यसोगर्दा शरीरलाई आवश्यक पर्ने तत्व खेर गइरहेको हुन्छ । त्यतिमात्र होइन हरियो सागपातलाई धेरै बेर पकाउँदा पनि कतिपय भिटामिन नष्ट हुन्छ त्यसैले यसलाई ठीक मात्रामा पकाउनु पर्दछ ।
Last Updated on: April 1st, 2021 at 4:39 pm